सेयरबाट करोडपति’ भन्ने एउटा विश्वव्यापी भनाइ नै छ । सेयर विश्लेषक डा. रवीन्द्र भट्टराईले त ‘सेयरबाट करोडपति’ भन्ने पुस्तक नै लेखेका छन् । सेयरलाई छिटो पैसा कमाउने सजिलो माध्यमका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले धेरैका लागि सेयर बजार आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा असफल भएर दिक्दार भएका कतिपय व्यक्ति सेयर बजारमा लगानी गरेर रातारात करोडपति बन्न पुगेका छन् । यसको गतिलो उदाहरण हुन्— अम्बिकाप्रसाद पौडेल । उनी हाल हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक छन् । पौडेल पोखरामा आइकम सकेर थप अध्ययनका लागि ०४८ सालमा काठमाडौं आए । व्यवस्थापनका विद्यार्थी भएकाले उनको झुकाव मार्केटतर्फ थियो । सुरुवाती दिनमा उनले काठमाडौंमा एउटा निजी कम्पनीमा काम गरे । निजी कम्पनीमा काम गर्दा उनको पारिश्रमिक चित्तबुझ्दो थिएन । उनको झुकाव सेयर मार्केटतर्फ बढ्न थाल्यो । पहिलो पटक उनले हिमालयन बैंकमा आइपिओ भरे, तर उनलाई एक कित्ता सेयर पनि परेन ।
दोस्रो पटक उनले एसबीआई बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकमा ५०/५० कित्ता सेयर भरे । यद्यपि त्यसमा १०/१० कित्तामात्र सेयर परेको पौडेल सम्झन्छन् । सेयर मार्केटको भोक यतिमै सीमित भएन, उनले सेकन्डरी मार्केटमा आँखा डुलाउन थाले । सेयर बजारमा होमिएका पौडेलले पहिलो पटक २०५० सालमा नविल बैंकको ५० कित्ता सेयर ८ सय रुपैयाँमा सेकेन्डरी मार्केटबाट उठाए ।
उनी वि.सं. २०५५ सम्म सेयरको किनबेचमा निरन्तर लागिरहे । त्यसपछि उनले बैंक अफ काठमाडौं, नबिल बैंक, एसबीआई बैंक आदिको सेयर सेकेन्डरी मार्केटबाट लिए भने इन्स्युरेन्सहरूको आइपिओ भर्ने काम पनि गरिरहे । २०५४ सालतिर सेकेन्डरी मोर्केटको भाउ चुर्लुम्मै घट्यो जसको प्रत्यक्ष मारमा पौडेल पनि परे । सेयरमा गरेको लगानी घाटामा गएपछि पौडेलले लोकसेवा आयोगको तयारी थाले । २०५५ सालमा उनले लेखा अधिकृतमा नाम निकाले । त्यसपछि उनको सरकारी जागिरे जीवन सुरु भयो । निजामति क्षेत्रमा जागिर सुरु गरेपछि पौडेलले २०५९ सालसम्म सेयरको दोस्रो बजारमा कारोबार गरेनन् ।
बिस्तारै विभिन्न संस्था सेयरबजारमा सुचिकृत हुन थाले । सेयरबजार फराकिलो बन्दै गयो । फेरि सेयर बजारमा लगानी हुन थाल्यो । पौडेलले पनि फेरि सेयर बजारमा लगानी गर्न थाले । त्यसपछि आफ्नो राम्रो कमाइ हुन थालेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, ‘केही समय घाटामा गएको सेयर बजार उकालो लागेपछि मेरो पनि कमाइ राम्रो हुन थाल्यो ।’ सेयर बजार उकालो लाग्न थालेपछि उनी धेरैजसो यतै व्यस्त हुन थाले । सेयर बजारमा राम्रो हुन थालेपछि उनले लेखा अधिकृत तहको सरकारी जागिर छाड्ने मनस्थिति बनाए ।
१० वर्षे निजामती जागिरबाट राजीनामा दिएर उनले केही साथीको सहकार्यमा २०६५ सालमा हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालको स्थापना गरे । व्यक्तिगत लगानीभन्दा संस्थागत लगानीलाई विशेष जोड दिने उद्देश्यले यो सस्था खोलिएको पौडेल बताउँछन् । उनी हाल यो संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक छन् । यो संस्थाले दोस्रो बजारमा करिव ४२ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दै आएको पौडेल बताउँछन् । उनको नेतृत्वमा १४ करोड लगानी गरेर सुरु गरिएको कम्पनीको पोर्टफोलियो अहिले डेढ अर्बको पुगिसकेको छ ।